Gulen iyo Erdogan Saaxibadi isa seegey – Xeernews24
Gulen iyo Erdogan Saaxibadi isa seegey
18. Juli 2016 /in Qormooyin/Articles /von admin
Intiinii Warbaahinta la socotay waxa aad ka war haysaan eedihii Madaxweynaha Waddanka Turkiga Rajab Dayib Erdogan uu u jeediyey Ninka Caanka ah ee Fatxulla Gulen oo uu ku eedeeyey in uu ka dambeeyey Afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi Turkiga ka dhacay habeenimadii Sabtidu soo galaysay. Waa Kuma Fatxullah Gulen?, Waxa aan akhristayaasheena qormadan oo taxane innoo noqon doonta kula wadaagi doonaa shakhsiyadda Fatxulla Gule, Mabaad’iida uu Xambaarsan Yahay, Taariikhdiisa Aqooneed, Halgankiisii Siyaasadda iyo Halka ay ku dhammaatay saaxiibtinimadii isaga iyo Madaxweyne Erdogan oo maalmahaa qaar ahaa rag aad isugu dhaw lana odhan karo Fatxulla Gulen waxa uu ka mid ahaa macallimiinta siyaasadda iyo hogaaminta iyo darkii uu ka soo cabay Madaxweyne Erdogan balse maanta isu ah cadaw aan la is tusi Karin. Fatxulla Gulen oo Hogaanka Turkigu ku eedeeyey in uu ahaa maskaxdii ka dambaysay Afgenbiga dhicisoobay waxa uu ku nool yahay wakhtigan dalka Maraykanka waxaanu mucaarid weyn ku yahay xukuumadda uu hogaamiyo Madaxweyne Erdogan.
Waa Kuma Fatxulla Gulen?
Fatxulla Gulen waxa uu ka dhashay qoys dabaqadda hoose ku jira oo noloshoodu danyar tahay, waxaannu ku dhashay magaalada Erzurum (Ardul Ruum) oo ku taalla waddanka Turkiga sannadkii 1941-kii, waxaanu ku barbaray deegaan diinta ku wanaagsan oo dadkoodu suufiyadda ku dhaqmaan. Waxa Golen ku dhammaystay tacliintiisa Machaydo casri ah oo uu ku qaatay aqoonta Shareecada Islaamka illaa uu ka gaadhay shahaado sare oo u suurta galisay in uu jaamacadaha ku galo. Waxa uu ku soo barbaaray tacliintiisii hoose macalimiin wadaado suufiyiin ah oo diinta aad u yaqaana. Aabaha dhalay Gulen oo la odhan jiray Refia Gulen ayaa door weyn ka qaatay in wiilkiisu isaga oo yar lagu daro tacliinta qur’aanka iyo shareecada islaamka waxaaanu ahaa aabbe aad ugu wanaagsanaa diinta oo ahaa imam masaajidka tukiya. Waxa uu aabihii ku wanaagsanaa qur’aan akhriska iyo kutubta shareecada oo uu dadka u dhigi jiray taasoo keentay in wiilkiisa Gulen uu ku barbaariyo dhaqan suubban, dad iyo dal jacayl iyo in uu noqdo shakhsi maskax furan oo la jecel yahay.
Bilawgii Nolosha Gulen Iyo Shaqooyinkiisii Ugu Horreeyey:
Markii uu Fatxulla Gulen dhammaystay aqoontii Diiniga ahayd ee Machadka Islaamiga ah ee Erzurum sannadkii 1959-kii, waxay dawladdu u qaadatay in uu daaci ama sheekh dadka waaniya ka noqdo masaajid ku yaalla deegaankiisa gaar ahaan qaybta Yurub ee dalkaasi Turkiga. Masajidkaasi ayuu ku noqday nin dadka dhex gala oo bulsheed aadna loogu soo ururo. Mudadaasi waxa uu bartay dhaqanka dadkiisa, dalalka jaarka ah iyo adduunka kaleba waxaanu wax badan ka daraaseeyay cilmiyada falsafadda, shareecada islaamka, deegaanka, suugaanta iyo xadaaradaha dalalka reer Bariga iyo reer Galbeedka. Sannadkii 1963-kii waxa uu galay oo uu laba sano ku soo qaatay tababarka ciidamada oo qof walba oo Turki ah wakhtigaasi ku khasab ahayd. Waxaana isla sannadkii xigay ee 1965-kii loo magacaabay Maayarka Magaalada Qarag Lariili. Waxaanu si weyn u soo jiitay dhallinyarada iyo dadka oo aad u jeclaa aqoontiisa iyo in ay wax ka dhagaystaan muxaadarooyinkiisa fikirka iyo diiniga ah, isaga oo ahaa nin cod kar ah. Sidaasaanu ku soo jiray muddo dheer oo uu ahaa Mufakir islaami ah oo dadku aad u jecel yihiin. waxa uu muxaadarooyin diini iyo fikir ahba ka jeedin jiray masaajidda isaga oo dhallinyarada Turkiga ugu baaqi jiray in ay diinta ku dhaqmaan oo ay ka fogaadaan mabda’ cilmaaniga ah ee diinta iyo siyaasadda iyo dhaqanka lagu kala sooco ee dalkaasi lagaga dhaqmayay. Waxa uu macallin ka noqday xilkaasi maayarnimo kadib jaamacado iyo macaahid isaga oo sii watay aqoontiisa diiniga ah iyo ta maadiga ahba.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/07/Gulen-iyo-Erdogan.jpg 162 312 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-07-18 13:09:222016-07-18 13:09:38Gulen iyo Erdogan Saaxibadi isa seegey
Injineer Mahad Abiib Norwey waxay naga dhigtay (Secon Class Citizens) Taliyaha cusub ee ciidanka Amisom Generaal Subagle oo xilkii si rasmi ah ula...